Na-ewere ụgbọ njem na USA? White House kpochapụrụ CDC
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » Na-ewere ụgbọ njem na USA? White House kpochapụrụ CDC
Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
ihe ntanetị 300px
Robert Ray Redfield Jr. bụ Onye isi ugbu a na erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa, na onye nchịkwa nke Agency maka ihe ndị na-egbu egbu na ndekọ aha ọrịa, na-eje ozi n'ọkwa abụọ ahụ kemgbe Machị 2018.
Ọ bụ ndị White House meriri Robert Redfield taa mgbe ọ kpaliri ịgbatị "iwu agaghị ahịa" na njem ndị njem n'ime afọ na-esote. Dika akuko banyere Axio si kwuo uzo abuo nwere ihe omuma banyere mkparita uka taa na ime ulo White House.
Shipsgbọ mmiri na-ebugharị na-egbu egbu na ndekọ ndekọ na ntiwapụ nke COVID-19 na mmalite nke ọrịa a. Onye isi ala US President chọrọ azụmahịa, gụnyere azụmahịa nke ụgbọ mmiri iji meghee nkwenye site na Redfield na ndị ọzọ so n'òtù President Trump.
Na-emebi Redfield abụrụla isi iyi nke ọgba aghara n'etiti ndị ọrụ ahụ ike ọha na eze n'ime nchịkwa, ndị na-arụ ụka na White House na-akpali ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eleghara sayensị anya ma na-agbasi mbọ ike imeghe akụ na ụba ma gbaa nnukwu nzukọ.
Dika akuko Axios si kwuo, na nzuko nke ndi oru ochichi nke coronavirus taa na Situation Room, Redfield kwusiri ike na mmachibido gọọmentị na ụgbọ mmiri, nke na-agwụ na Wednesde, kwesịrị ịgbatị ruo na February 2021 n'ihi oke nje ahụ na nsogbu nke mgbasa na njem ụgbọ mmiri.
Onye osote onye isi ala Mike Pence, onye chịkọbara nzukọ taa, gwara Redfield na ha ga-aga n'ihu na atụmatụ ọzọ, dịka ndị otu ọrụ ọrụ abụọ si kwuo.
Ọchịchị Trump na-ezube ịgbatị ya enweghị iwu maka ụgbọ mmiri ruo na Ọktọba 31 na njikwa na mmachi amachibidoro ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri. Cna-emebi mba ndị ọzọ gụnyere Seychelles amachibidoro ya iwu ruo afọ abụọ.
Ndị nnọchianya nke ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri ga-ezute na nchịkwa Trump na Fraịde “ịkọwa mgbanwe ha na ọtụtụ ụzọ ha ga-esi belata ihe egwu ma hụ na ahụike ọha na eze,” ka onye ọrụ White House kwuru.
Whitelọ White House enweela nsogbu na Redfield ruo ọnwa ole na ole ugbu a, ndị isi dị elu gụnyere Onye isi ala Trump na-agbagha ụfọdụ okwu Redfield banyere coronavirus na usoro ahụike ọha na eze chọrọ.
Robert R. Redfield, MD, bụ Onye isi nke 18 nke erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na Onye nchịkwa nke Agencylọ Ọrụ maka Ihe Na-egbu Ihe na Ọrịa Ọrịa. Ọ bụ onye ndu ahụike ọha na eze na-arụsi ọrụ ike na nyocha ahụike na nlekọta ahụike nke ọrịa nje na-adịghị ala ala na ọrịa na-efe efe, ọkachasị nje HIV, maka ihe karịrị afọ 30.
Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi ntọala nke Ngalaba Nnyocha na-akpata Retroviral n'ime Mmemme Nnyocha HIV nke US, ma lara ezumike nká mgbe afọ 20 nke ọrụ na US Army Medical Corps Mgbe ọrụ agha ya gasịrị, ya na Dr. William Blattner na Dr. Robert C. Gallo guzobere Mahadum nke Maryland's Institute of Human Virology ma jee ozi dị ka Onye isi nke Ọrịa Na-efe Ọrịa na Onye isi oche Ọgwụ na Mahadum nke Maryland School of Ọgwụ.
Dr. Redfield nyere ọtụtụ onyinye oge mbụ dị mkpa na nghọta sayensị banyere nje HIV, gụnyere ngosipụta nke mkpa ọ dị site na nnabata nwoke na nwanyị, mmepe nke usoro nlebara anya Walter Reed maka nje HIV, na ngosipụta nke nje HIV na-arụ ọrụ na ọkwa niile nke nje HIV. .
Na mgbakwunye na ọrụ nyocha ya, Dr. Redfield lebara anya na usoro nlekọta ahụike sara mbara na-enye nlekọta na ọgwụgwọ HIV karịa ndị ọrịa 5,000 na obodo Baltimore / Washington, DC.
Dr. Redfield jere ozi dị ka onye so na Council Advisory Council na HIV / AIDS site na 2005 ruo 2009, ma họpụta ya dị ka Onye isi oche nke Kọmitii Mba Nile site na 2006 ruo 2009.
Ọ bụ onye gara aga na Office nke Advisory Council Advisory Council na National Institute of Health, Fogarty International Center Advisory Board na National Institute of Health, na Advisory Anti-Infective Agent Kọmitii nke Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ.